मनाङलाई पराजित गर्दै मनकामना कपको फाइनलमा क्याम्रुनी टोली | NewsKarobar
गृहपृष्ठ मनाङलाई पराजित गर्दै मनकामना कपको फाइनलमा क्याम्रुनी टोली
मनाङलाई पराजित गर्दै मनकामना कपको फाइनलमा क्याम्रुनी टोली
उपाधिका लागि एपीएफसँग भिड्ने
लिग विजेता एवं डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई सडेन डेथको सिकार बनाउँदै पाहुना टोली क्यामरुनको डफिन्स टिम फेमली पोखरामा जारी मनकामना केबलकार पोखरा कप २०७५ को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पोखरा रंगशालामा शनिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा क्यामरुनको डफिन्स टिमले मनाङलाई सडेन डेथमा पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफसँग भेट पक्का गरेको हो । फाइनल खेल आइतबार हुनेछ ।
९० मिनेटको निर्धारित समयमा दुबैतर्फ एक/एक गोल र थपिएको २० मिनेटमा दुबैतर्फबाट गोल हुन नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो । टाइब्रेकरमा पनि दुबैतर्फ ४–४ गोल भएपछि खेल निर्णयको अन्तिम विकल्प सडेन डेथमा पुगेको हो ।
सडेन डेथमा डफिन्सका जो एङ्गौलाले गोल गरे भने डफिन्सका उभिएमले प्रहार गरेको बल पोस्ट माथिबाट बाहिरिएको थियो । प्रतियोगितामा पाहुना टोलीका अर्मेल अहन्दा म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले ट्रफीका साथै ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार हात पारे ।
कास्की जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा विजेताले ७ लाख ५५ हजार र उपविजेताले ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ ।
प्रकाशित समय ०८:०० बजे
पछिल्लाे - वाइडबडी : कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ? कहिले लाग्छ टुंगो ?
अघिल्लाे - स्वास्थ्यमन्त्रीकै कारण हेल्थ असिस्टेन्ट आन्दोलित भएका हुन् : दिपेन्द्र खड्का